बेनी अस्पतालमा दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सक आउने | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home म्याग्दी समाचार बेनी नगरपालिका बेनी अस्पतालमा दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सक आउने
बेनी अस्पतालमा दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सक आउने
२०७६, १० कार्तिक आईतवार १३:२२
बेनी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने तिहार लगत्तै विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। बिरामीको चाप बढ्दै जान थालेपछि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा तत्काल दुईजना बिशेषज्ञ चिकित्सक अस्पतालमा आउने छन् । म्याग्दीका साथै छिमेकी जिल्ला पर्वत र बागलुङको पश्चिम क्षेत्रबाट आउने विरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध भएका चिकित्सक बाहेक विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर मनोज घिमिरेले बताए ।
‘दुवैपक्ष बिच सम्झौता भइसकेको छ,‘उहाँहरु तिहार लगत्तै आउनुहुन्छ’ डा.घिमिरेले बेनीअनलाइनलाई भने । दरबन्दीभन्दा कम चिकित्सकका कारण अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको गुनासोलाई समेत यो सम्झौताले सहज भएको बताए । तत्काललाई पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सक आउनेछन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थितीमा नियमित एपेन्डीसाईटिस,हाईड्रोसिल र हर्नियाको अप्रेसन सहित अप्रेसनको दायरा फराकिलो बनाउन सहज हुने डा. घिमिरेको भनाई छ । जनरल मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति सेवाका लागि छुट्टै शाखा बनाएर सेवा दिने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कुटवालले बताए । ‘गुणस्तरीय सेवाका लागि प्रतिबद्ध छौ,‘बिरामीको गुनासोलाई आधार बनाएर नयाँ योजना सहित अस्पताललाई सञ्चालन गछौ’ कटुवालले भने ।
उनका अनुसार आकस्मिक सेवासहित प्रयोगशाला, एक्सरे लगाएत प्रदेश सरकार अन्तरगतका सेवाहरुलाई अस्पतालमा ल्याउने गरी योजनाबद्ध तरिकाले काम भइरहेको बताए । विशेषज्ञ (कन्सलटेन्ट) चिकित्सकको सेवालाई समेत अस्पतालबाटै दिने गरी प्रयास भइरहेको बताए । उनले दरबन्दीको अभाव तथा सुगम क्षेत्रमा चिकित्सकको आर्कषणले समस्या भइरहेको बताए । एकजना कन्सलटेन्ट चिकित्सकलाई अस्पतालमा ल्याउन र आवश्यक उपकरणको ब्यवस्था गर्न सकेमा थप उपचारका लागि पोखरा जानुपर्ने बिरामीको संख्या ह्वात्तै घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
अस्पतालमा निक साईमन्स इस्टिच्युटको सहयोगमा अप्रेशनसहितको प्रसुती सेवा जिल्ला अस्पतालमै सञ्चालन गरेपछि महिला तथा बालबालिकालाई धेरै सहज भएको छ । हाल निक साईमन्सबाट क्लिीनिकल कोअर्डिनेटर डा. नबराज बस्ताकोटी कार्यरत छन् । अस्पतालका केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको रुखो बोली, बिरामीलाई प्रयोग गर्ने शब्दबाट अस्पतालप्रति गुनासो आउन थालेपछि ब्यवस्थापन समितिले सुधार सहितका अभियानले त्यस्ता गतिविधि निस्तेज हुने जनाएको छ ।
Previous articleजुवाखालबाट दुई करोड ६७ लाखसहित को को पक्राउ परे?
Next articleकिसानको खेतमै हरायो धानको रास ‘थुप्रो’ (फोटो फिचर)